पुष्पको पारिश्रमिक दुई तिहाई कम ? -FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
फिल्मी फण्डा । एक समय पारिश्रमिकलाई लिएर नायक पुष्प खड्काको चर्चा चलेको थियो । ३० लाख पारिश्रमिक माग गरेको र त्यसमा दुइटा हिरो भएको फिल्म नखेल्ने शर्तसम्म राखेको चर्चा खुबै चलेको थियो । ३० लाख पारिश्रमिक माग गरेको कुरा उनले पनि स्वीकार गरेका थिए । फिल्म मंगलमबाट लाइमलाइटमा आएका पुष्पको उक्त डिमाण्ड निकै महँगो भएको बताउने गरिन्थ्यो ।
अहिले पुष्प फिल्म ‘चालबाज’मा आबद्ध भएका छन् । जहाँ उनको इच्छा अनुसार नायक त उनी एक्लै छन् । तर पारिश्रमिक उनको डिमाण्ड भन्दा दुई तिहाई कम भएको चर्चा फिल्मी वृतमा रहेको छ ।
उनले फिल्म चालबाजबाट झण्डै १० लाखको छेऊछाऊ पुग्ने रकम पाउने भएको फिल्म निर्माण टिमका स्रोत बताउँछन् ।
फिल्म ‘मारुनी’ले राम्रै चर्चा पाउँदा पुष्पले तत्कालै अर्को फिल्म पाएनन् । फिल्म बक्स अफिसमा असफल रहेपछि पुष्पको बोली उनैलाई भारी परेको छ । राम्रो स्क्रिप्ट पाएर फिल्म साइन गरेको बताउने पुष्पको बोलीमा कतिको वजन होला ? त्यो भने कुर्नै पर्ला !
यो पनि पढ्नुहोस् : ‘प्रेम गीत ३’ को फरक लुक्समा सुनिल थापा
फिल्मी फण्डा । यस बर्षको प्रतिक्षत मानिएको फिल्म प्रेम गीत ३ ले घोषणादेखि नै फिल्मको वारेमा विभिन्न जानकारीहरु बाहिर ल्याएका छन् । फिल्म घोषणामा कलाकारको नाम सहित आएको टिमले नायिका छनौटको लागि गरिएको अडिशन लगायतका समाचारहरु बाहिर ल्याउँदै फ्लोरमा गएको फिल्मले समाचार मात्र हैन फिल्मको विवरणहरु नै बाहिर ल्याईरहेका छन् ।
फिल्मको स्टुडियोदेखि सेटहरु र लोकेशनहरु लगातार बाहिर ल्याएको फिल्मका निर्माण टिमले क्रमश फष्ट लुक्सको नाममा कलाकारहरुको क्यारेक्टर पोष्टरहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । प्रदिप खड्कादेखि नायिका कृष्टिना गुरुङ र शिव श्रेष्ठदेखि बालकलाकार अनुभव रेग्मी सम्मको क्यारेक्टर पोष्टर रिलिज गरिसकेको छ । यहि बीचमा फिल्मका अर्का कलाकार सुनिल थापाको पोष्टर पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
पोस्टरमा कलाकार थापाको अवतार प्रभावशाली देखाईएको छ । हिमाली भेगमा खिचिएको फिल्ममा थापा स्वयंम हिमाली भेगका पात्र देखिएका छन् । भारी हिउँ परिरहेको बेलामा उनि कुनै पदयात्राको लागि निस्किएको पोस्टरमा देखाईएको छ । एक पोस्टरमा उनले पौराणिक बाजा बजाइरहेका छन् । निर्माण पक्षले थापाको भूमिका बारेमा जानकारी भने गराएका छैनन् ।
यस बर्षको अन्तमा रिलिजमा आउने फिल्ममा प्रदिप खड्का, कृष्टिना गुरुङ, मनिश राउत, शिव श्रेष्ठ, अनुभव रेग्मी, सुनिल थापा लगायतको अभिनय रहेको छ । विग बजेटमा निर्माण भएको फिल्मलाई निर्माता सन्तोष सेन र छेतेन गुरुङले संयुक्त रुपमा निर्देशन गरिरहेका छन् । फिल्मलाई राजेश श्रेष्ठले खिचिरहेका छन् । छायाँकनको अन्तिम चरणमा रहेको फिल्ममा कविराज गहतराजको नृत्य तथा हिमाल केसीको द्धुन्द निर्देशन रहेको छ ।
यस बर्षको नयाँ बर्षमा तीन वटा भन्दा बढि नेपाली फिल्महरु रिलिज हुने तयारीमा छन् । यस मध्ये प्रेम गीत ३ र चपलि हाईटले फिल्म नसर्ने घोषणा गरिसकेका छन् भने अन्य केही फिल्म आउने संभावना रहेको छ । यदि दुई वा दुई भन्दा फिल्महरु एक साथ रिलिज भएको खण्डा प्रमे गीत ३ लाई कमर्सियल रुपमा चूनौती थपिनेछ ।
विग बजेटमा निर्माण गरिएको कारण प्रेम गीत ३ ले बढि कलेक्शन गर्नुपर्नेछ । त्यसको लागि अधिकांश हल प्रेम गीत ३ लाई अवश्यक हुनेछ । बढि फिल्मले हल र शो बाँधिने हुदाँ विग बजेटका फिल्महरुले सहकार्यमा सिंगल रिलिज गर्न सके निर्माता र फिल्म क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने पक्का छ ।